यहाँ अवस्था शैलीहरूका लागि अवस्थाहरू परिभाषित गर्नुहोस्.
ससर्त शैलीहरू अनुच्छेद शैलीहरू हुन जस्मा प्रसङ्ग मेनुमा आधारित भएर बिभिन्न गुणहरू हुन्छन । एक पटक परिभाषित गरिएमा,तपाईँंले ससर्त शैलीको ससर्त गुणहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न।
त्यसपछि नयाँ अनुच्छेद शैलीलाई ससर्त शैलीको रूपमा परिभाषित गर्नलाई शर्त ट्याब क्लिक गर्नुहोस् र ससर्त शैली चयन गर्नुहोस्।
प्रसङ्ग भित्र, हेडर प्रविष्टी चयन गर्नुहोस् र अनुच्छेद शैली अन्तर्गत तपाईँंको व्यावशायिक पत्रमा हेडरका लागि शैली चयन गर्नुहोस्,उदाहरणका लागि,पूर्वनिर्धारित अनुच्छेद शैली "हेडर"। तपाईँंले तपाईँंको आफ्नै शैली चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँंले अनुच्छेद शैलीहरू सूची बाकसमा चयन गरिएको प्रविष्टीलाई डबल-क्लिक गरेर वा मानाङ्कन गर्नुहोस् प्रयोग गरेर प्रसङ्गमा अनुच्छेद शैली लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
हेडर पाठमा अहिले तपाईँंले हेडर अनुच्छेद शैलीमा निर्दिष्ट गरिएको विशेषताहरू छन,जबकी कागजातको अन्य भागमा व्याबसायिक पत्र ससर्त अनुच्छेद शैलीमा परिभाषित गरिएका विशेषताहरू छन।
प्रसङ्गमा लागू गरिएको अनुच्छेद शैली अन्य ढाँचाहरू(RTF, HTML, र अरू थुप्रै) मा निर्यात गरिरहेको बेलामा प्रयोग हुन्छ।
नयाँ शैलीलाई अवस्थामय शैलीको रूपमा यो बाकस जाँच गर्नुहोस्.
सामाग्रीमा लागू गरिएको सबै अनुच्छेद शैलीहरूको सूची तपाईँं हेर्न सक्नुहुन्छ.
प्रसङ्गमा मानाङ्कन गर्न सकिने सम्पूर्ण अनुच्छेद शैलीहरूको एउटा सूची सूची बाकसमा समाविष्ट हुन्छ।
हालको सामाग्री सँग उपयुक्त्त शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.
सक्रिय शैली कोटिको सबै शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.
लागू गरिएको शैलीहरू
हालको कागजातमा लागू गरिएको शैलीहरू (चयन गरिएको कोटिको) प्रदर्शन गर्नुहोस्.
चयन शैली कोटिमा सबै प्रयोगकर्ता-परिभाषित शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.
पाठका लागि ढाँचा गरिएको शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.
शीर्षकहरूका लागि ढाँचा गरिएको शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.
अनुक्रमणिकाहरूका लागि ढाँचा गरिएको शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्.
ढाँचा गरिएको शैलीहरू हेडरहरू फुटरहरू, पादटिप्पणीहरू, अन्तटिप्पणीहरू, तालिकाहरू, र विकल्पका लागि प्रदर्शन गर्नुहोस्.
HTML कागजातहरूका लागि शैलीहरूको सूची प्रदर्शन गर्नुहोस्.
अवस्था अनुसारको शैलीहरू
प्रयोगकर्ता-परिभाषित अवस्था अनुसारको शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्।.
सोपानक्रमिक सूचीमा चयन गरिएका कोटि शैलीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्. उपस्तरमा शैलीहरू हेर्नका लागि, जोड सङ्केत (+) मा क्लिक गर्नुहोस् उपस्तर नाम पछिको.
चयन शैली प्रदान गरिएको हालको सामाग्री हटाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.